Maka onye mgbịrịgba na-ada ụda: A Literature Classic | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Maka onye mgbịrịgba bụ otu n'ime akwụkwọ akụkọ kachasị ama ama nke onye edemede America na onye nta akụkọ Ernest Hemingway. Originaldị ya mbụ na Bekee -Maka Onye Bell Tolls- E bipụtara ya na New York na Ọktọba 1940. Na 1999, ọrụ ahụ gụnyere na ndepụta nke "Akwụkwọ 100 nke narị afọ", nke akwụkwọ akụkọ Parisian mepụtara Ụwa.
Ihe omuma a mere n’afọ nke abụọ nke agha obodo Spanish; n'oge ahụ, onye na-akwado ya na-ebi akụkọ ịhụnanya n'etiti agha ahụ. Onyinye Novel maka Akwụkwọ mepụtara akwụkwọ akụkọ a dabere na ahụmịhe ọkachamara ya dịka onye nta akụkọ agha. Na mgbakwunye, o tinyere ụfọdụ isiokwu onwe onye, ​​dị ka obodo ya na nna ya igbu onwe ya. E bipụtara nsụgharị Spanish n'asụsụ Spanish na 1942 na Buenos Aires (Argentina)
1 Nchịkọta nke onye ndị mgbịrịgba na-ada
1.1 Mbu iwe
1.2 Ọrụ na-amalite
1.3 Mee nkwenye
2 Nkọwa nke Onye ụda mgbịrịgba
2.1 Nhazi na ụdị onye na-ede akụkọ
2.2.1 Robert Jọdan
2.4.1 Abụ na nsọpụrụ nke akwụkwọ ọgụgụ
2.4.2 Aha nke akwụkwọ akụkọ
3.1 Akwụkwọ akụkọ ndị ode akwụkwọ
Na nchikota nke Maka onye mgbịrịgba
N’isi ụtụtụ nke Mee 30, 1937, ndị Republicans mere mbuso agha Segovia na-ebu agha. Mgbe ihe ịga nke ọma nke ọgụ ahụ, General Golz nyere ọrụ dị mkpa ­nye onye ọrụ afọ ofufo America na ọkachamara mgbawa, Robert Jọdan. A gwara ya na ga-agbaji akwa mmiri iji gbochie mbuso agha nke ndị obodo.
Onye America aga Sierra de Guadarrama, nso ebe trenị ndị iro, ebe o nwere nduzi nke onye agha ochie Anselmo. Robert ga-akpọrịrị ndị otu na-emebi iwu nọ na mpaghara ahụ iji nyere ya aka n'ọrụ ahụ. Na mbido osobo ye Pablo, bụ onye dujeru ndu-ishi ogu-ịgba, ma nke ahụ, na nke mbụ, ọ kwadoghị Jordan.
N'ime nzukọ a enwerekwa nwunye Pablo - Pilar-, onye, ​​mgbe onye ọlụlụ ya jụrụ, gosipụtara onwe ya, kwenye ndị otu ahụ wee bụrụ onye ndu ọhụụ. N'ebe ahụ, Jordan zutere Maria, nwa agbọghọ mara mma nke jisiri ike jide ya na mbụ. Ka ha na-eme atụmatụ mbuso agha ahụ, a mụrụ ịhụnanya n'etiti ha abụọ, nke mere na Robert na-arọ nrọ maka ọdịnihu na nwanyị ahụ mara mma.
Maka onye ...
Site na ebumnuche iwusi atụmatụ a ike, Jọdan kpọtụrụ ndị ọchịagha ndị ọzọ nke El Sordo duziri, bụ onye kwetakwara ịrụ ọrụ. Site n'oge ahụ gawa, Robert malitere ịtụ ụjọ, ebe ihe niile na-egosi na ọrụ igbu onwe ya. Ya mere, otu ndi otu ndi a na-emezu ebumnuche ya na otu ebumnuche: ichebe Republic si n'aka ndi fascist, na ime ihe obula n'echebara onwu anwu.
Nyocha nke Maka onye mgbịrịgba
Nhazi na ụdị onye na-ede akụkọ
Site n'aka dobM na-agbanye mgbịrịgba bụ akwụkwọ agha nke nwere peeji 494 kesara isi 43. Hemingway jiri onye ozo mara ihe nke ato, onye na-agwa nkata ahụ site n'echiche na nkọwa nke onye protagonist.
Ọ bụ onye nkụzi America nke otu afọ gara aga sonyere ndị Republican na-alụ Agha Obodo. Ọ ọkachamara dị ka onye na-agbanwe agbanwe ya mere ọ ga-arụ ọrụ dị mkpa n'ọgụ ahụ. N'etiti ọrụ ọ hụrụ María n'anya, onye mere ka ọ gbanwee echiche ya na ndụ ya. Kaosinadị, mmetụta ndị a niile bụ ọnọdụ ikuku ọnwụ gbara ya gburugburu.
O bu nwa mgbei gbara iri-na-iteghete nke ndi otu Pablo zoputara, nke mere o jiri buru Pilar. Ọ tara ahụhụ mmekpa ahụ n'aka ndị fasike, bụ ndị kpụrụ ya isi wee hapụ akara ha. María hụrụ Robert n'anya, ha abụọ na-ebi ụbọchị na-anụ ọkụ n'obi, yana ọtụtụ atụmatụ ọnụ, mana ọdịnihu ga-ada ada n'ihi ozi e kenyere onye nkuzi America.
Ọ bụ nwoke 68 afọ, enyi kwesịrị ntụkwasị obi nke Jọdan, na-eguzosi ike n'ihe nye echiche ya na ndị obodo ya. Ọ bụ ihe dị ịrịba ama na akụkọ ntolite, ebe ọ bụ na ekele maka enyemaka ya, onye protagonist na-achịkwa ịkpọtụrụ Pablo.
Ọ bụ onye isi nke otu ndị agha okpuru. Ruo ogologo oge ọ bụ ezigbo onye nhazi, mana ọ na-agabiga nsogbu nke dugara ya na nsogbu na mmanya, na-enyo enyo ma na-aghọ aghụghọ, nke mere na ọ na-efunahụ onye ndu nke ihu.
Ọ bụ Nwunye Pablo, nwanyị siri ike, dimkpa na ọgụ; doro anya na nkwenye ya. N'agbanyeghị àgwà ya siri ike, ọ bụ ezigbo mmadụ nke na-akpali ndị mmadụ ịtụkwasị ndị ọzọ obi. Ọ bụ n'ihi nke a na ọ nweghị nsogbu na-eburu ndị otu ahụ n'agbanyeghị nsogbu Pablo.
Mgbe mmetụta nke akwụkwọ ahụ gasịrị, na 1943 ihe nkiri ahụ nwere otu aha dị ka akwụkwọ akụkọ ahụ wepụtara, nke Paramount Pictures mepụtara ma bụrụ onye Sam Wood duziri. Ndị rụpụtara ya bụ: Gary Cooper - onye gbara Robert Jordan — na Ingrid Bergman —na-akpọ Maria. Ihe nkiri ahụ bụ ihe ịga nke ọma na fim na-enwetakwa nhoputa Oscar itoolu.
Abụ na nsọpụrụ nke akwụkwọ ọgụgụ
Bandtù egwu atọ dị mkpa mepụtara egwu iji sọpụrụ ọrụ ahụ. Ndị a bụ:
The American gbalaga Metallica ọkọnọ na 1984 song "N'ihi na onye Bell Tolls" nke album Gbaa ịnyịnya
N’afọ 1993, otu Britain kpọrọ Bee Gees wepụtara egwu a kpọrọ “For Whom the Bell Tolls” na ọba egwu ha. Size abụghị ihe niile
N’afọ 2007, ndị otu Spen a na-akpọ Los Muertos de Cristo tinyekwara n’akwụkwọ ha Libertarian Rhapsody Mpịakọta II, isiokwu: "Maka ndị mgbịrịgba na-ada ụda"
Aha nke akwụkwọ akụkọ
Hemingway kpọrọ akwụkwọ ahụ sitere na mpempe akwụkwọ ewepụtara na ọrụ ahụ Nsọpụrụ ofufe (1623) site n'aka onye na-ede uri John Donne. A na-akpọ iberibe akwụkwọ a “Site na nwayọ nwayọ ha na - asị: ị ga - anwụ”, akụkụ ya na - ekwusi ike: “Ọnwụ nke mmadụ ọ bụla na - ebelata m n’ihi na m so agbụrụ mmadụ; ya mere, ezipụla ka ị jụọ maka onye mgbịrịgba na-aga; ha meere gị okpukpu abụọ ”.
Onye edemede na odeakụkọ bụ Ernest Miller Hemingway mụrụ na July 21, 1899 na Illinois (United States). Ndị mụrụ ya bụ Clarence Edmonds Hemingway na Grace Hall Hemingway, ndị a na-akwanyere ùgwù na Oak Park. N’agba nke ikpeazụ ya n’ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ọ gụnyere klas nke nta akụkọ. N'ebe ahụ, o mere ọtụtụ isiokwu na 1916 o jisiri ike bipụta otu n'ime ndị a na akwụkwọ akụkọ ụlọ akwụkwọ The Trapeze.
Na 1917, ọ malitere ahụmahụ ya dị ka onye nta akụkọ na akwụkwọ akụkọ Kansas City Star. Ka oge na-aga, ọ gara Agha Worldwa nke Mbụ dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala, mana n'oge na-adịghị anya ọ laghachiri obodo ya ịrụ ọrụ na mgbasa ozi ọzọ. Na 1937, e zigara ya ka ọ bụrụ onye na-ede akụkọ agha na Spain, ebe ahụ ọ hụrụ ọtụtụ esemokwu agha nke oge ahụ na ọtụtụ afọ ọ gafere ụwa niile.
Hemingway jikọtara ọrụ ya dị ka onye nta akụkọ na agụụ ya dị ka onye edemede, mbụ ya akwụkwọ: Mmiri mmiri, pụtara ìhè na 1926. Nke a bụ otu o si gosipụta ọrụ iri na abụọ, nke akwụkwọ ikpeazụ ya na ndụ pụtara ìhè: Agadi nwoke na oke osimiri (1952). N'ihi akụkọ a, onye edemede natara Pulitzer Nrite na 1953 ma nye ya Nobel Nrite maka Akwụkwọ na 1954.
Iyi nke Oge opupu ihe ubi (1926)
Anyanwụ na-ebili (1926)
Ọgwụgwụ nke Ogwe Aka (1929)
Inwe na Enweghi (1937)
Maka Onye Bell Tolls (1940).
N'ofe Osimiri ma banye na Osisi (1950)
Nwoke Ochie na Oke Osimiri (1952)
Agwaetiti dị na Stream (1970)
Ubi Iden (1986)
Eziokwu na Light nke Mbụ (1999)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Maka onye mgbịrịgba